13 Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida 2022
13 Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida
Waxaa jira dugsiyo badan oo baahi gaar ah leh oo ku yaal Ameerika iyo wixii ka dambeeya laakiin maqaalkani wuxuu kugu dhex socon doonaa iskuulada baahiyaha gaarka ah ee ugu fiican Florida. Dugsiyada baahiyaha gaarka ah leh ayaa loo heli karaa dadka u baahan fiiro gaar ah.
Waxaa jira qaybo kala duwan oo carruurta leh baahiyo gaar ah maxaa yeelay malaha carruur kala duwan ayaa leh dhibaatooyin kala duwan. Carruurtaan naafada ah waxaa laga yaabaa inaysan si sahal ah wax ugu baran dugsiyada dadweynaha sidaas darteedna baahida loo qabo in lagu qoro dugsiga baahiyaha gaarka ah leh waa mid aad u sareysa.
Way badan yihiin oo waxaan isku dayi doonaa intii suurtogal ah inaan soo jeedino xulashooyin wanaagsan oo kala duwan oo aad ka dooran karto.
1 Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida
1.1 1. Dugsiga Waxbarashada Gaarka ah ee Waqooyiga Florida
1.2 2. Akademiyada Autism -ka
1.3 3. Dugsiga Arbor ee Bartamaha Florida
1.4 4. Xarunta Akadeemiyada Palm Harbor
1.5 5. Atlantis Academy Palm Beach
1.6 6. Xarunta Autism -ka ee heer sare ee Florida (FACE)
1.7 7. Akademiyada Rabbaaniga
1.8 8. Dugsiga Autism ee STARS
1.9 9. Dugsiga Buuraleyda ee Autism (MSA)
1.10 10. Machadka Lakeland ee waxbarashada
1.11 11. Dugsiga Vanguard
1.12 12. Xarunta Akadeemiyada Lutz
1.13 13. Xarunta Autism Academy ee Livingstone Academy
Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida
Dugsiga Waxbarashada Gaarka ah ee Waqooyiga Florida
Akademiyada Autism -ka
Dugsiga Arbor ee Bartamaha Florida
Xarunta Akadeemiyada Palm Harbor
Xeebaha Palmis Academy Palm Beach
Xarunta Akadeemiyada Lutz
Xarunta Autism -ka ee heer sare ee Florida (FAC E)
Akadamiyada Rabbaaniga ah
Dugsiga Buurta ee Autism
STARS dugsiga Autism
Machadka Lakeland ee Waxbarashada
Xarunta Autism Academy Academy (LAAC)
1. Dugsiga Waxbarashada Gaarka ah ee Waqooyiga Florida
Dugsiga Waxbarashada Gaarka ah ee Waqooyiga Florida wuxuu soo ifbaxay 1992 ka dib markii koox waalidiin ah ay ogaadeen baahida loo qabo fursado waxbarasho oo wanaagsan oo loogu talagalay saddexda ilmood ee leh kala duwanaanshaha caqliga iyo koritaanka.
Fikraddan oo ku bilaabantay sidii riyo ayaa soo martay waddo horumarineed oo ka duwan halkaas oo ardaydu ay isku duubnaadaan, kobciyaan, waxna ku bartaan iyagoon cadaadis la saarin sidii saaxiibbadood oo kale oo aan la malayn karin geedi socod horumarineed oo ka duwan.
Ka dib laba iyo toban sannadood oo la aasaasay, Dugsiga Waxbarashada Gaarka ah ee Waqooyiga Florida wuxuu u guuray Xerada Andersmith oo ku taal Waddada Mill Creek toban sano ka dib markii loo raray, dugsiga waxaa aqoonsaday Golaha Florida ee Dugsiyada Madaxa Bannaan.
Tan iyo markaasna, dugsigu wuxuu sii waday inuu si weyn u koro oo aan shaki ku jirin. Waa mid ka mid ah iskuulada baahiyaha gaarka ah ee ugu fiican Florida oo u adeega ardayda leh kala duwanaanshaha caqliga iyo koritaanka inta u dhaxaysa da'da 6-22.
Waxa kale oo jira fursad barnaamij jaamacadeed oo loogu talagalay dhalinyarada qaangaarka ah inta u dhaxaysa 22-40.
Dugsiga Waxbarashada Gaarka ah ee Waqooyiga Florida wuxuu hayaa saamiga macallinka-ardayga ee 1: 6 iyo lix heer waxbarid oo ku jira kow iyo toban fasal.
Booqo Website -ka Dugsiga halkan
2. Akademiyada Autism -ka
Akadeemiyadda Autism -ka waa mid ka mid ah Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida. Iyo sida Dugsiga Waxbarashada Gaarka ah ee Waqooyiga Florida, waxaa aasaasay waalid leh laba carruur ah oo qaba Autism oo doonayay fursad wanaagsan oo nolosha, waxbarashada, iyo horumarka ilmaha ah.
Ujeeddada akadeemiyadu waa in ay bixiso beddel waxbarasho oo la awoodi karo oo ka duwan nidaamka dugsiyada dadweynaha sida in qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee haysta carruur leh baahiyo gaar ah ay iman karaan.
Akadeemiyadu waxay leedahay koox xirfadlayaal ah oo aad ugu heellan goobta waxbarashada khaaska ah oo leh awood caqli badan si ay ula tacaalaan carruurta qabta cudurka autism iyo cilladaha kale ee horumarineed.
Shahaadooyinka kale, kooxda xirfadda leh waxay waayo -aragnimo u leeyihiin falanqaynta dabeecadda la dabaqay, hadalka iyo luuqadda, daaweynta shaqada iyo jirka, waxbarashada ardayga ee gaarka ah, autism, iyo arrimaha kale ee koritaanka.
Akadeemiyadda Autism -ka, ardayda waxaa loola dhaqmaa si sharaf leh, iyo qaabka waxbarasho ee ugu fiican ee ilmo kasta si sahal ah loogu habeeyo mar walba. Layaab ma leh Akademiyada Autism -ka ayaa si fudud u ah mid ka mid ah Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida.
Hababka waxbaridda ee Akadeemiyada Autism -ka ayaa si joogto ah u kobcaya maxaa yeelay dugsigu wuxuu u hoggaansamayaa habab waxbaris oo cusub iyo aqoon -isweydaarsiyo iyo seminaarro ayaa had iyo jeer diyaar u ah xirfadleyda si ay hadda u ahaadaan oo ay si fudud ugu qulqulaan baridda ardayda.
Ka eeg macluumaad dheeraad ah websaydka dugsiga
3. Dugsiga Arbor ee Bartamaha Florida
Dugsiga Arbor ee Bartamaha Florida waxaa la aasaasay sannadkii 2002 isagoo wata qorshe asal ah oo lagu siinayo hagaajinta tacliinta iyo daaweynta hadalka carruurta leh dhibaatooyinka xagga horumarka.
Fursadan ayaa la heli jiray 1-2 sano ka hor inta aan ardayda dib loogu celin goobtii waxbarashada caadiga ahayd. Si kastaba ha ahaatee, habaynta iskuulkan ayaa laga beddelay mid gaaban, dugsi dhexe oo loo beddelay dugsi waqti-dheer oo fasallo ah, sannadkii 2007, waxaa lagu daray fasalka 5aad.
Dugsiga Arbor ee Bartamaha Florida wuxuu leeyahay dugsi sare iyo heerar kala -guur siday u kala horreeyaan.
4. Xarunta Akadeemiyada Palm Harbor
Xarunta Akadeemiyadu waa dugsi gaar loo leeyahay oo madaxbannaan oo qoysku maamulayay tan iyo 1968. Waxay siisaa manhaj diyaarin ah ardayda ku kala duwan waxbarashada xagga fasallada 4-6.
Xarunta Akadeemiyadu waxay hubisaa in isku-kalsoonaanta, is-fikirka, iyo isku-kalsoonida ardayda si dhow loo kobciyo si togan. Siyaasadaha abaabulka waxaa ka mid ah: in ardayda lagu dhiirrigeliyo inay sida ugu wanaagsan u siiyaan dhammaan hawlaha ay qabtaan, in shaqaaluhu fahmaan muhiimadda shaqadooda, oo ay ku shaqeeyaan qiiro.
Shaqaalaha iyo macallimiintu waxay leeyihiin waayo -aragnimo xirfadeed oo ku aaddan baaxad ballaadhan oo ah kala duwanaanshaha barashada iyo caqabadaha kuwaas oo ay ka mid yihiin: ADHD, autism/spectrum/Asperger's, dysleksi, iwm, iyo ardayda ayaa lagu caawiyaa inay gaaraan ujeeddooyinkooda waxbarasho ee shaqsiyeed.
Ardayda sanad dugsiyeedku waxay isqori karaan wakhti kasta oo sannadka ah ilaa inta uu boos ka jiro dugsiga. Oggolaanshaha Xarunta Akadeemiyadda Palm Harbor waxay ku bilaabi kartaa wicitaan taleefan oo loogu talagalay agaasimaha dugsiga ka dib waalidiinta iyo ardayda mustaqbalka ayaa booqan kara dugsiga oo la kulmi kara agaasimaha si loo hubiyo haddii ay rabaan in qaybtoodu ay tagto Xarunta Akadeemiyadda Palm Harbor.
Waxbarashada Akadeemiyadda Xarunta, Palm Harbor waxay ku timaadaa qorshe lacag bixin oo kala duwan iyo ikhtiyaarro iyo deeqo waxbarasho ayaa sidoo kale la heli karaa. Ardayda leh Qorshaha 504 ama qorshaha Waxbarashada shaqsiga ah ayaa u qalmi kara deeq waxbarasho ee akadeemiyadda loo yaqaan Deeqda McKay iyo arday badan ayaa sidoo kale u qalmi kara Deeqaha Awood -siinta Qoyska; ikhtiyaarkan ayaa la heli karaa iyada oo ku saleysan xadka dakhliga qoyska ee dhowaan la soo kiciyay ama baahiyo gaar ah.
5. Atlantis Academy Palm Beach
Xeebaha Palmis Academy Palm Beach waa mid ka mid ah Dugsiyada Baahiyaha Gaarka ah ee ugu Fiican Florida.
Dugsiga waxaa la aasaasay 1996 si ardayda leh dhibaatooyin waxbarasho iyo kuwa ku dhibtooday jawiga dugsiga ay hadda ku sugan yihiin ay u helaan sababo ay ku sii fiicnaadaan.
Waxay quseysaa muhiimadda xiriir waalid/ macallin/ arday oo aad ugu dhow faa'iidada ilmo kasta. Waxaa jira saamiga ardayga-macalinka oo hooseeya kaas oo u saamaxaya ardayda inay si adag u dhisaan isku-kalsoonidooda iyo isku-kalsoonidooda. Ujeeddada koowaad ee Akadeemiyadu waa in la kobciyo ardayda oo la eego koritaanka ilmo kasta si aan xad lahayn.
Xeebaha Palmis Academy Palm Beach waxay bixisaa manhaj aasaasi ah oo la jaan qaada Heerarka Florida ee farshaxanka luqadda Ingiriiska, xisaabta, sayniska, iyo barashada bulshada.
Dugsigu wuxuu si wax ku ool ah u adeegsadaa farsamada inta lagu jiro waxbaridda iyo horumarinta xirfadaha bulshada ayaa lagu daraa maalinta oo dhan. Naadiyada dugsiga kadib, umeerin, iyo barnaamijyada xagaaga si kor loogu qaado waayo-aragnimada ardayda.
Illaa iyo hadda, iskuulku wuxuu leeyahay diiwaangelin 95% waayo-aragnimo qalin-jabis ah, qiyaastii 99.9% ardayda ayaa helaya deeqaha waxbarasho ee gobolka, waxaana jira saamiga boqolleyda 11: 1 saamiga ardayga-macalinka.
Dugsigu wuxuu aqbalaa arjiyada sanadka oo dhan waana la soo dhaweynayaa ardayda maalin kasta. Ardayda mustaqbalka ayaa la filayaa inay ugu yaraan hal maalin ku qaataan xerada si ardayga iyo maamulka dugsiguba midba midka kale wax uga barto.
Ka hor inta aan dib loo bilaabin, arday kasta waxaa laga filayaa inuu haysto hadda iyo asalka dukumentiyada soo socda:
Shahaadada Florida ee foomka tallaalka (DH680)
Imtixaanka caafimaadka gelitaanka dugsiga Florida (SH3040)
Foomka Xogta Shakhsiyeed
Oggolaanshaha daaweynta caafimaadka
Foomka Waxbarashada Jimicsiga
Qiimaynta Cilmi -nafsiga (haddii ay khuseyso)
Qorshaha Waxbarashada Shaqsiga (IEP) (Haddii ay khuseyso)
Nuqul Shahaadada dhalashada
6. Xarunta Autism -ka ee heer sare ee Florida (FACE)
Wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah iskuulada baahiyaha gaarka ah ee ugu wanaagsan Florida, iskuulku wuxuu fadhiyaa meel u dhow Kaniisadda Ilaah ee Riverhills. Dugsigu wuxuu wadaa barnaamijyo waxbarasho oo loogu talagalay carruurta iyo dhallinyarada qaangaarka ah ee qaba Autism.
Dhammaan macallimiinta FACE waxaa shahaadooyin ka haysta dugsiyada Degmada Hillsborough waxayna haystaan ​​shahaadada waxbarashada ardayga ee gaarka ah iyo shahaadada K-6 iyo ugu yaraan shahaadada bachelorka oo leh shahaadada waxbaridda. Isku-kalsoonaanta iyo horumarka nafsaaniga ah ee ardayda si weyn ayaa loo kobciyaa.
7. Akademiyada Rabbaaniga
Akademiyada ilaahnimadu waa mid ka mid ah iskuulada baahiyaha gaarka ah ee ugu fiican Florida, waxaa la aasaasay 2005 Ingrid Garcia iyo Pamela Vogelsang.
Labaduba waxay haysteen shahaadooyin waxbarasho oo gaar ah iyo waayo -aragnimo 25 sano ah oo ku saabsan waxbarashada gaarka ah oo la isku daray markii la aasaasay dugsiga.
Markay arkeen baahida waxbarasho khaas ah ee gudaha iyo daafaha Ameerika, waxay lahaayeen himilo ah inay ardaydaas siiyaan fursad ay ku koraan awooddooda buuxda ee waxbarashada, xirfadaha, iyo barashada xirfadaha nolosha ee deegaan soo dhaweynaya. Barnaamijyada la heli karo waa dugsiga dhexe, dugsiga sare, iyo barnaamijyada dadka waaweyn.
Xirfadlayaal khibrad leh qaarkood ayaa daryeeli kara ardayda.
8. Dugsiga Autism ee STARS
Dugsiga Autism -ka ee STARS wuxuu diyaariyaa nidaamka waxbarashada sayniska ee la xaqiijiyay oo ku habboon carruurta la nool Autism si ay ula kulmaan horumarka bulshada oo ay hore ugu sii socdaan noloshooda.
Shaqaalaha waxaa ka go'an inay u diyaariyaan ardayda inay ku gaaraan dhaqankooda farsamada iyo luqadaha badan ku dhex yaal deegaan jacayl iyo daryeel. STARS waxay u isticmaashaa Houghton Mifflin Harcourt horumarinta manhajka. Manhajka STARS si joogto ah ayaa dib loogu noqdaa waxaana ka mid ah kuwan soo socda:
Farshaxanka, daweynta, dheesha, iyo isboortiga
Barnaamijyada Robotic iyo Chess
Daaweynta Shaqada iyo Jirka
Daaweynta Hadalka iyo Luqadda
Siyaasadda aan takoorka lahayn ee STARS waxay soo jeedinaysaa in ardayda jinsiyad kasta, midab kasta, asal qaran ama qowmiyad loo oggolaado inay bartaan oo ay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyin kasta oo la heli karo sida ardayda kale. Iskuulka STARS ee autism -ka ayaa si fudud u ah mid ka mid ah iskuulada baahiyaha gaarka ah ee ugu fiican Florida.
Deeqaha la heli karo ee ardayda waxaa ka mid ah Deeqda McKay, Deeqda PLSA.
9. Dugsiga Buuraleyda ee Autism (MSA)
Mid ka mid ah caqiidada adag ee Mountaineers School of Autism ayaa ah in ilmo kasta uu gaar yahay oo uu gaaro cirka haddii si habboon loo kobciyo.
Mountineers School of Autism wuxuu ardayda ku barbaariyaa inay noqdaan kuwa ugu wanaagsan tacliinta, xirfadaha bulshada, daaweynta hadalka, daaweynta shaqada, ciyaaraha fudud, muusigga, luqadda dhegoolaha, xirfadda noolaanshaha madaxbannaan, saaxiibtinimada, taageerada, duugista/ saliidaha lagama maarmaanka ah, iPads/ Technology, Spanish, sign luuqad iyo dulqaad iyo jacayl aan dhammaad lahayn.
Habka gelitaanku waa mid toos ah oo uma baahna borotokoollo.
Weydii gelitaanka ama joojinta safarka.
Qaado baaritaanka qaadashada, ka dibna sug talo soo jeedin dheeraad ah si aad u aqbasho ama u diido ardayga oggolaanshaha waxaa lagu sameeyaa guddiga Fulinta ee MSA.
10. Machadka Lakeland ee waxbarashada
Machadka Lakeland ee barashada waa dugsi caafimaad oo adeegyo u fidiya ardayda u baahan adeegyada luqadda iyo fiiro gaar ah. Cabbirka fasalka waa 1:10 saamiga Macallinka iyo ardayga. Machadka Lakeland ee barashada, ardaydu waxay u kala baxaan laba qaybood: baahiyo gaar ah iyo Barteyaasha Luqadda Ingiriiska.
Waa mid ka mid ah iskuulada baahiyaha gaarka ah ee ugu fiican Florida. Codsiyada waa la soo dhaweynayaa ilaa inta uu boos ka bannaan yahay dugsiga.
Booqo Shabakada Dugsiga
11. Dugsiga Vanguard
Dugsiga Vanguard waa mid ka mid ah iskuulada baahiyaha gaarka ah ee ugu fiican Florida. Waxay ka welwelsan tahay u diyaarinta dhallinta si aan xad lahayn. Waxay leeyihiin falsafad waarta oo ah in gaagaabyadu aysan daruuri ahayn oo ha tusin waddo wanaagsan oo nolosha ah maxaa yeelay wax qiimo leh si fudud laguma helo. Si guul weyn looga gaaro nolosha, ardayda waxaa lagu tababaraa xirfadda-dhisidda, ku-hadalka, isku-xirnaanta, ad-adayga, kalsoonida, adkeysiga, iyo is-hoosaysiinta.
Waxaa jira fursado loogu talagalay ardayda inay iska diiwaangeliyaan naadiyada ardayda, dhacdooyinka bulshada, mashaariicda adeegga bulshada, iyo waxqabadyo kale oo badan oo kor u qaada waxqabadka dhalinyarada.
12. Xarunta Akadeemiyada Lutz
Xarunta Akadeemiyadu waa dugsi waxbarasho baahiyo gaar ah oo ku yaal Lutz, oo ka baxsan Tampa, Florida. Waxay asal ahaan ka bilaabatay 1968 iyadoo la siinayo manhaj udiyaarin kuliyad oo loogu talagalay ardayda naafada ah barashada fasalada 4-12. Waa dugsi gaar loo leeyahay oo madaxbannaan oo si buuxda loo aqoonsan yahay. Ardayda waxaa lagu baraa sida ay isku kalsoon yihiin oo ay naftooda u qiimeeyaan. Ardaydu waxay ka qaybgalaan safaro dibadeed sannadka oo dhan si ay u caawiyaan awoodda ay wax ku bartaan iyagoo adeegsanaya sawirro. Fursadaha deeqda waxbarasho ayaa u furan ardayda. Habka codsigu waa mid toos ah.
13. Xarunta Autism Academy ee Livingstone Academy
Mid ka mid ah iskuulada baahiyaha gaarka ah ee ugu fiican Florida, waxay ku taal Bloomingdale, Florida. Waa dugsi madaxbannaan, aan macaash doon ahayn oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha waxbarasho ee gaarka ah ee carruurta naafada ah ee barashada autismka.
Dugsigu wuxuu ku wadaa manhajkiisa hab waxbarid oo dhinacyo badan leh si wax looga qabto qaabka waxbarashada gaarka ah ee arday kasta. Ardaydu waxay kaloo heli karaan jimicsiga Dareenka, daaweynta hadalka iyo luqadda, daweynta shaqada, falanqaynta habdhaqanka ee la dabaqay.
Immisa dugsi oo Baahiyaha Gaarka ah ayaa ku yaal Florida?
Waxaa jira dugsiyo aad u tiro badan oo ku yaal Florida laakiin tiro lagu qiyaasay ilaa 394 iskuul oo baahiyaha gaarka ah ku leh Florida. Aad bay u badan yihiin, sidaa darteed aad bay kuugu fududahay inaad doorato midka aad ugu raaxaysato.
Waa maxay Waxbarashada Gaarka ah ee Florida
Waxbarashada gaarka ah ee Florida si fudud ayaa loogu qeexi karaa tilmaam loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha iyo shuruudaha koritaanka ee carruurta naafada ah ee Florida.
Carruurta ku jirta dugsiyada leh baahiyo waxbarasho oo khaas ah sababtuna tahay naafonimo ama dib -u -dhac ku yimaadda geeddi -socodka kobcinta waxaa loogu yeeraa arday gaar ah. Caawimada gaarka ah ee iyaga lagu siiyo dugsiga waxaa lagu magacaabaa waxbarashada gaarka ah ee ardayga, ama ESE.
Previous Post:Top 10 Barnaamijyada PhD oo si buuxda loo maalgeliyey oo leh Xiriirada Codsiga
Post Next:10 kulliyadaha ugu fiican California ee cilmu -nafsiga